Ogaden News Agency (ONA) – Shaahid Mooyee Sheeku Kuma Cabiri Karo
Shaahid Mooyee Sheeku Kuma Cabiri Karo
Posted by ONA Admin	/ June 22, 2013
Siyaad Macalin Qorane waa dhibane mudo ku xidhnaa Jeel Ogaden. Sida aynu wada ognahay wadanka Ogaadeeniya waxaa kajira dagaal taariikhi ah oo illaa haad socda. Dagaalkan ayaa udhaxeeya gumaysiga wadanka ku habsaday iyo gumaysidiidkii iska lahaa dhulka.
Hadaba dagaalka ay Itobiya kula jirto dadka ayaa ah mid aysan u kala aabayeelin noolaha deegaanka haduu yahay dad, xoolo, dhir, iyo daaqba. Waxay Itobiya ka samaysay Ogadenya goobo lagu ciqaabo muwaadiniinta taasoo ladoonayo in shacabka xoog lagu maquuniyo oo rabitaankooda xoriyadda lagaga horjoogsado. Waxay dadka ugu yimaadaan guryahooda waxayna u siiqaadan goobahaas oo ay ugu yeedhaan xabsi hasa ahaatee aysan kajirin shuruucdii xabsiyada lagu yaqiinay, sida in qofka la siiyo raashin hal waqtina ha ahaatee maadaama la soo xidhay. Xataa xoolaha ayaa marka laga soo reebo daaqsintiisii loo geeyaa wuxuu ku noolaado.
Waxaad arkaysaa dad lagu xidhay goobta oo aan lahaynin danbigii loo soo xidhay ama mudada uu ku xukaman yahay oo halkaa lagu ciqaabayo.Waxaad arkaysaa dad xidhan mudo aad u dheer laguna xukumay 15 sano iyo in kabadan isla markaana aan lagu haysanin wax cad oo danbi ah. Waxa ugu badan ee dadka ay ugu hanjabaan laguna soo xidho ayaa ah waad taageertaa Jabhada ONLF. Waxaad is-odhan hadday Itobiya haysato xabsi wada qaada dhamaan shacabka S.Ogadenya way ku soo wada xareyn lahayd.
Habada waxaa noo suura gashay in aan waraysi dheer la yeelano muwaadin kamid ahaa dadka xabsigaas mudada kusoo jiray oo ka mid ahaa dadkii Ilaahay uu ka soo daayay. Wuxuu noo sheegay Siyaad Macalin in laxidhay bishii labaad ee sanadkii 2010 xabsigana uu kujiray mudo 3ex sano iyo bilo. Waxaana lasoo daayay bil kahor.
Waxaan waydiiyay sababtii loo qabsaday iyo habkii loo qabtay.
Wuxuu yidhi; “Amin habeen ah ayay ciidamada Itobiya iigu yimaadeen gurigayga. Waxay igu bilaabeen handadaad iyo waan ku ognahay waxaad tahay iyo qaraac, kadibna sidaa ayay igula tageen waxayna i geeyeen magaalada Q/dahar ee xarunta gobolka Qorahay. Muddo yar ka dibana waxa la’ii gudbiyay magaalada Jigjiga halkaas oo la’igu dhex daray kumanyaal muwaadiin ah oo ku xaraysan goobtaas loo yaqaano jeel Ogaden.
Waxaan waydiinay dadka ku xidhan Jeel Ogaden qiyas ahaan inta ay dhan yihiin?
Wuxuu yidhi; “Waxaan hubaa marki aan soo baxayay oo dadka qaar lasii daayay ayaa lays tiriyay. Waxaan ogaaday cadadka dadka ee ku suganaa waqtigaa Jeel Ogaden wuxuu ahaa 4000 iyo dheeraad aanan hubin inta dheer. Waxaana nalagu sii daayay 800 oo ruux. Waana xogta aan isleeyahay waad ogaan kartaa waxaana aaminsanahay in wax badan oo aanan ogaan karin ay jiraan. Sababtoo ah waxaa jira qolal gaar ah oo dad aan la ogayn inay nool yihiin iyo in la dilay lagu xareyn jiray.”
Waxaan waydiiyay maxaa kuula yaab badnaa intaad ku jirtay jeelkaa?
Wuxu yidhi; “Runtii ma yaabin oo habeenkii gurigayga layga kaxaystay waxna la’ii sheegi waayay xabsina la’i dhigay ayaaba yaab iigu filayd. Si kastaba ha ahaatee waxaan soo qaadan lahaa dhacdooyinkii foosha xumaa ee meesha aan ku arkay. Waxaana ka mid ahaa; Ninka masuulka ka ah xabisa ayaa si aan qarsoodi ahayn gabadhaha u faraxumaynayay. 12 gabdhood oo intii lalabaxay amin habeen ah qaar kamid ah ay aroortii dhinteen. Gabdho lagu xadgudbay sidaasna ku uuraystay kuna dhalay xabsiga. Dadka meesha ku jira oo intuu ka batay cidhiidhiga ka jira aadan seexan karin. Waxyaabaha ka dhaca Jeel Ogaden shaahid mooyee sheeko kuma sharixi karo. Waxaaba laga yaabaa in wax meesha ka jira aanan si sax ah kuugu sawirin dadkuna aysan fahmin. Waxaan dhihi lahaa waa un qiyaame aduunka yaala oo dadka lagu ciqaabayo.
Waxaan weydiiya maxaa hada ugu darnaa jeelka?.
Wuxuu yidhi; “Cunto la,aan. Dadka marka la xidho ugu yaraan 30% waa laga daba iman. Markii mudo lagu daalo, xoolo badanna ku baxaan ayaa laga caajisaa ruuxiina geeri ayaa laga soo qaadaa. Dadka intiisa kale oo ah 70% wax looma keeno. Ayadoo ay gaajo saas u jirto ayaa haddana waxaa ka dhasha xanuuno sida shubanka, daacuun iyo hargab aan ruuxa ka baxaynin oo xanuunka feedhaha ee TB-shida ku noqonaya.
Waxaan weydiiyay; Dadku markay xanuunsadaan ma ladaweeyaa?
Wuxuu yidhi; “Waa sababaha aan kuu leeyahay dhibka kuuma sharixi karo. See loo daawayn? Waxaaba la keenayaa kuwo caafimaad qaba say ugu xanuunsadaan meesha, waxaa la laynayaa kuwo nool oo ku jira. Arinta waa sidaad doonto u dhimo wax kuu maqan majiro.”
Waxaan weydiiyay; Maxaa laguu soo daaay adiga?
Wuxuu yidhi; “Waxaan ahayn dadkii iska xidhnaa mudada wax danbi ah oo nalagu haystayna majirin xataa tuhuna. Waxaana ahayn dad waayeel ah gabdho xanuunsan iyo qaar dhalinyaro ah oo lagu yidhi wa la idin sii dayn hadaad Liyu Police noqonaysaan. Waxayna ahaayeen 2 qaybood qabtii hore waxay intoodii badanyd u goosteen duurka (jabhada ONLF) qaybtii danbe waxay ku xaraysan yihiin xerada ciidanka ee Garabcase”.
Waxaa wareeysiga qaaday: